Indlu yeKona, iHawkshead - *Ibhokisi yeBhokisi yeChocolate*
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguMichelle
Iintendelezo ezityetyisiweyo kunye neendledlana zeHawkshead zihonjiswe ziindlwana ezintle, zamandulo ezihonjiswe ngeengobozi ezijingayo ezimibalabala kunye neembiza ezityaliweyo kwaye uya kufumana iBanga lesi-II elonwabisayo elidweliswe kwiKona House ethe nca emva kwesikwere esikhulu kunye nevenkile yekofu edumileyo ye-Honeypot. Le ndlwana yemveli iye yafumana utshintsho olukhulu ngoncedo lwabarhwebi balapha abathe bayilungisa ngokupheleleyo indawo yokuhlala ukuze ibonelele ngezixhobo ezigqwesileyo kwiKona yeNdlu yesibini kunye nenja yaso.
Idume ngonxibelelwano lwayo loncwadi kuzo zombini iWordsworth kunye neBeatrix Potter, thatha izakhiwo zembali ezifana neSikolo seGrammar saseHawkshead apho uWilliam wayefunda khona kwaye wakrola igama lakhe edesikeni, iofisi yomyeni kaBeatrix, ngoku iyigalari egameni lakhe okanye uphinda ulandele amanyathelo kaWilliam ukuya eVicarage Lane. , udlule kwi-Walker Ground kwaye ungene kwiGoosey Foot Tarn, indawo enoxolo evaleleke ngaphakathi kwiHlathi laseGrizedale. Emva kweentsuku zokuhamba okanye ukukhwela ibhayisekile, buyela elalini kwaye ukonwabele i-fayre eyenziwe yasekhaya kwenye yeendawo zokuhlala ezidumileyo ngelixa umamele ubusuku obuqhelekileyo bomculo.
Ukusuka kumphambili wale ndlu ingaphambili, ngena ngqo kwigumbi lokuphumla elipholileyo elineesofa ezinzulu ezilungiselelwe ukujikeleza isitovu esitshisayo, i-SMART TV, iDVD kunye nesitulo sefestile. Inyathelo lokunyuka likhokelela kwindawo yokutyela ekhitshini efakwe kakuhle enoluhlu olululo lweeyunithi zesage ezisongelwe kwiikhawunta zebhastile kunye ne-oveni yombane, i-induction hob, ifriji enebhokisi encinci yesikhenkcisi, umatshini wokuhlamba izitya. Umatshini wekofu weTassimo kunye ne-microwave. Kukho ucango oluluncedo oluya ngaphandle. Indawo yokuhlala ihleli ngaphandle kwegumbi lokuphumla, inkulu ngokwaneleyo kuzo zonke izixhobo zakho zangaphandle ezibandakanya iibhayisekile ezimbalwa; Kukho iwasher / isomisi kunye nefriji kunye neWC esebenzayo kunye nesitya. Izitepsi ezithe tyaba zikhokelela kwigumbi lokulala lenkosi elinempahla ekhethwe ngokugqibeleleyo kunye neelinen ezintle kwaye ushiywe kwigumbi lokuhlambela elibanzi nelinyulwe ngokugqwesileyo elinendawo enkulu yokuhamba, ishawari enamandla, indawo yokuhlambela ephindwe kabini ekhululekileyo ebekwe phantsi kwesibhakabhaka kumbindi wegumbi. igumbi, isitya, iWC kunye nethawula yethawula eshushu.
Ngaphandle, kukho ibhentshi ngaphambili kunye nenye indawo yokuhlala ngasemva enetafile kunye nezitulo. Indawo yokupaka ikwindlela yemvume kwindawo yokupaka iimoto ekufutshane kwaye imvume ikwindlwana yokufika kwakho.
Izimvo eziyi-1 875